Nhau - Iwo Mashanu Matanho Parizvino Kutyaira Iyo Inosuka Mvura Musika
Iwo Matanho Matanhatu Ari Kutyaira Musika Wekunatsa Mvura
Ongororo ichangobva kuitwa neWater Quality Association yakaratidza kuti makumi matatu kubva muzana evatengi vanoshandisa mvura yekugara vaive nehanya nemhando yemvura inoyerera kubva pamapombi avo. Izvi zvinogona kubatsira kutsanangura kuti sei vatengi veAmerica vakashandisa zvinopfuura mabhiriyoni gumi nematanhatu emvura mumabhodhoro gore rapfuura, uye nei mushamba wekuchenesa mvura uchiramba uchiona kukura kukuru uye uchifungidzirwa kuti unogadzira madhora mabhiriyoni makumi matatu nemakumi matatu nemakumi maviri nemakumi maviri nemaviri sezvo makambani ari muchadenga achiedza kusangana nezvinodiwa nevatengi.
Nekudaro, kunetsekana nehunhu hwemvura haisi iyo yega chikonzero chekukura kwemusika uyu. Pasi rose, takaona miitiro mikuru mishanu ichisimudza chiutsi, zvese izvo zvatinotenda zvichabatsira mukuenderera mberi kwekushanduka uye kuwedzera kwemusika.
1. Slimmer Chigadzirwa Profiles
MuAsia yose, kuwedzera kwemitengo yezvivakwa uye kukura mumaruwa-kutama kwemaguta kuri kumanikidza vanhu kuti vagare munzvimbo diki. Nenhamba shoma uye nzvimbo yekuchengetera midziyo yemagetsi, vatengi vari kutsvaga zvigadzirwa izvo zvisinga gadzire chete nzvimbo asi zvinobatsira kubvisa kuwanda. Musika wekuchenesa mvura uri kugadzirisa maitiro aya nekugadzira zvigadzirwa zvidiki zvine slimmer profiles. Semuenzaniso, Coway akagadzira iyo MyHANDSPAN chigadzirwa mutsara, unosanganisira vanonatsa vasina kuwanda kupfuura hupamhi hweruoko rwako. Sezvo yekuwedzera kaunda nzvimbo yaigona kutorwa seyakaomarara, zvine musoro kuti Bosch Thermotechnology yakagadzira iyo Bosch AQ nhevedzano yekugara yekuchenesa mvura, iyo yakagadzirirwa kukwana pasi pekambani uye nekunze kwekuona.
Hazvigoneki kuti mafurati muAsia anokura chero nguva munguva pfupi iri kutevera, saka parizvino, maneja vezvigadzirwa vanofanirwa kuramba vachirwira nzvimbo yakawanda mumakitchen evatengi nekugadzira machina ekuchenesa emvura madiki.
2. Re-mineralization yeKunaka uye Hutano
Alkaline uye pH-yakaringana mvura yave kuita iri kuwedzera mamiriro muabhodhoro emvura indasitiri, uye ikozvino, vanochenesa mvura vanoda chidimbu chemusika wavo vega. Kusimbisa chikonzero chavo ndiko kudiwa kuri kukura kwezvigadzirwa uye zvinhu munzvimbo yehutano, umo mabrands muindasitiri yeConsumer Packaged Goods (CPG) arikutsvaga kupinda mumadhora makumi matatu emadhora ekuAmerica ari kushandisa "nzira dzekuwedzera dzehutano." Imwe kambani, Mitte®, inotengesa smart home water system iyo inodarika kunatsa nekusimudzira mvura kuburikidza nere-mineralization. Yayo yakasarudzika yekutengesa poindi? Mitte mvura haisi yakachena chete, asi ine hutano.
Ehezve, hutano haisiriyo yega chinhu chinotyaira iyo re-mineralization maitiro. Raviro yemvura, kunyanya yemvura yemumabhodhoro, inyaya inopokana zvakanyanya, uye kuronda zvicherwa izvozvi zvinoonekwa sechinhu chakakosha kuravira. Muchokwadi, BWT, kuburikidza neayo patent tekinoroji tekinoroji tekinoroji, inoburitsa magnesium ichidzokera mumvura panguva yeiyo filtration maitiro kuti ive netarisiro iri nani. Izvi hazvingoshandi chete kune yakachena mvura yekunwa asi zvinobatsira kusimudzira kuravira kwezvimwe zvinwiwa zvakaita sekofi, espresso uye tii.
3. Kukura kwekudiwa kwehutachiona
Vanofungidzirwa kuti vanhu vanosvika mabhirioni 2.1 pasi rese vanoshaya mukana wekuwana mvura yakachengeteka, ayo mamirioni 289 anogara muAsia Pacific. Mvura zhinji muAsia yakasvibiswa nemarara emuindasitiri nemumaguta, zvinoreva kuti mukana wekusangana neE.coli mabhakitiriya maringe nemamwe mavhairasi anotakurwa nemvura akakwirira zvinoshamisa. Nekudaro, vanochenesa mvura vanofanirwa kuchengetedza utachiona hwemvura pamusoro pepfungwa, uye isu tiri kuona iyo yekuchenesa ratings iyo inotsauka kubva kuNSF kirasi A / B uye inochinja kune yakadzokororwa ratings senge 3-log E. coli. Izvi zvinopa chinogamuchirika chichienderera mberi chengetedzo yemvura yekunwa masisitimu asi zvinogona kuzadzikiswa zvakanyanya mushe uye padiki padiki pane akakwirisa mwero wekuuraya utachiona.
4. Yechokwadi-nguva Yemvura Mhando Yekunzwa
Chimiro chiri kubuda mukuwedzera kwemidziyo yemumba yakangwara ndiyo firita yemvura yakabatana. Nekupa kuenderera kwedata kune mapuratifomu eapurogiramu, mafirita emvura akabatana anogona kuita akasiyana mabasa kubva pakuongorora mhando yemvura kuratidza vatengi kwavo kunwa mvura kwezuva nezuva. Izvi zvishandiso zvinoramba zvichiwedzera kuve zvine hungwaru uye zvine mukana wekuwedzera kubva pekugara kusvika kumaguta maseturu. Semuenzaniso, kuve nema sensors kuyambuka manisiparati emvura sisitimu kwaisakwanisa kungozivisa chete vakuru nekukasira kwechinhu chine tsvina, asi kunogona zvakare kuongorora huwandu hwemvura nenzira kwayo uye nekuona kuti nharaunda dzese dzawana mvura yakachena.
5. Ramba uchipenya
Kana usati wanzwa nezveLaCroix, zvinogoneka kuti unogona kunge uchigara pasi pedombo. Uye kupenga kwakakomberedza chiratidzo, uko vamwe vakataura sechitendero, kune mamwe maratidziro akaita sePepsiCo anotarisa kutora mukana. Vanochenesa mvura, sezvavanoramba vachitevedzera zvinoitika zviripo mumusika wemvura wemabhodhoro, vatora mabheti pamvura inopenya zvakare. Mumwe muenzaniso ndeye kupenya kwemvura kwaCoway. Vatengi vakaratidza kuda kwavo kubhadhara mvura yemhando yepamusoro, uye vanochenesa mvura vari kutsvaga kuenzanisa kuda uku nezvigadzirwa zvitsva zvinova nechokwadi chehunhu hwemvura uye kuenderana nezvinodiwa nevatengi.
Aya angori mafambiro mashanu atiri kucherechedza mumusika izvozvi, asi nyika payiri kuramba ichienda kune hupenyu hune hutano uye kudiwa kwemvura yekunwa yakachena kuchikwira, musika wevanochenesa mvura uchakurawo zvakare, uchiunza iwo huwandu hwe maitiro matsva isu tichava nechokwadi chekuchengeta maziso edu.